Global Voices teny Malagasy » ‘Tsy hifidy izahay raha tsy vita ny làlana’: hetsika tsy fankatoavana sivily any amin’ireo faritra any India · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Mey 2019 4:50 GMT 1	 · Mpanoratra VideoVolunteers Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsimo, India, Fanoherana, Fifidianana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika
Pikantsary avy amin'ny lahatsary YouTube nalain'ny VideoVolunteers.
Nosoratan'i Grace Jolliffe ny lahatsoratra ary nivoaka voalohany tao amin'ny Video Volunteers , vondrom-piarahamonina mpampita vaovao iraisampirenena miorina ao India nahazo loka. Navoaka eto ambany ny endrika nasiam-panovana ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Naka ny dingana tsy mahazatra amin'ny fanaovana ankivy ny fizotry ny fifidianana ny sasany amin'ireo mpifidy Indiana raha mandalo ny fifidianana ankapobeny  i India izay nozarazaraina tamin'ny dingana miisa fito nanomboka ny 11 Aprily ka hatramin'ny 19 May 2019 mba hifidianana ny parlemanta faha-17 (Lok Sabha).
Vakio bebe kokoa: Ny zavatra tsara ho fantatra momba ny fifidianana ankapobeny 2019 any India 
Ao Goa , fanjakana atsimoatsinanan'i India, nandà tsy hifidy ny vondrom-poko any amin'ny distrikan'i (block  amin'ny teny Anglisy) Marlem any Cancona, tamin'ny 23 Aprily, nandritra ny dingana fahatelo amin'ny fifidianana ankapobeny ary nilaza fa adinon'ny governemanta tanteraka ny olana mahazo ny tanànakelin'izy ireo. Ny tsy nanomezan'ny governemanta azy ireo ny fotodrafitrasa fototra, toy ny làlana sy ny famatsian-drano no tena hitarainan'izy ireo.
Nitatitra ny hetsi-panoherana nataon'ireo mponina ao amin'ny tananakely ny lahatsary iray avy amin'ny Mpitati-baovaon'ny Vondrom-piarahamonina Devidas Gaonkar, mpikambana avy amin'ny foko tompotany ao Goa  antsoina hoe Velip:
Ato amin'ity lahatsary ity, milaza i Pandurang Gaonkar, mponina avy ao amin'ny tanànakely Marli fa:
Lalana tsy vita mirefy telo kilaometatra Tirwal mankany Marlem. Hatramin'izao, tsy misy fepetra noraisin'ireo manampahefana. Manao fampanantenana paokaty fotsiny izy ireo, fa tsy misy ny fampiharana. Tsy hifidy izahay noho izany antony izany.
Niaina tao amin'io tanànakely io nandritra ny 20 taona mahery ny mponina ao Marlem . Tamin'ny taona 1968, nanambara ny tanànakelin'i Marlem ho ampahany amin'ny valan-javaboary ho an'ny biby mpirenireny ny Departemantan'ny Ala. Izany no nahatonga ny olana goavana tamin'ny fanamboarana ny lalana, na ny asa fampandrosoana hafa rehetra tao amin'ity faritra ity. Araka ny tatitra  dia nisy ny tetikasa famatsiana herinaratra ambanin'ny tany ho an'io faritra io izay nankatoavina tamin'ny voalohany, saingy nijanona tsy ela akory izany taorian'ny fanoherana avy amin'ny Departemantam-panjakana misahana ny ala  raha vao nanomboka ny asa fangadiana ny tany. Ny tsy fisian'ny tena lalana no loharanom-pahakiviana hafa ho an'ny mponina ao an-toerana. Mila mandeha  lalan-tany sy lalana simba mirefy 2,8 km ny olona iray vao tonga any amin'ny trano voalohany ao Marlem. Farany, Mbola sarotra ho an'ny mponina ao an-tananakely ny ho voavatsy herinaratra sy rano fisotro madio.
Nanapa-kevitra ny tsy hifidy amin'ny fifidianana mba hisarihana ny sain'ny manampahefana momba ny olana ireo mponina ao Marlem, sy ireo mponina avy amin'ny tanànakely roa hafa ihany koa rehefa nanao fitarainana sy nampiaka-peo ampahibemaso imbetsaka kanefa tsy nahitam-baliny izany. “Tonga niresaka taminay ireo manampahefana misahana ny fifidianana, saingy mbola tsy miova ny fanapahan-kevitray ny tsy hifidy,” hoy i Pandurang. Nihaona tamin'ireo mponina ihany koa i Isidore Fernandes , mpikambana mpanohitra ( ao amin'ny Kongresy Nasionaly Indiana  ) ao amin'ny Antenimiera ao Cancona. Nanome toky ny fanohanany ny hetsika izy taorian'ny nandrenesany ny fitarainan'izy ireo. “Zava-dehibe ho an'ny governemanta ny manome lalana, rano ary herinaratra ho an'ny mponina. Amin'izao fotoana, tsy niraharaha ireo fotodrafitrasa ireo ho an'ny tananakelin'i Marlem ireo tompon'andraikitry ny governemanta “, hoy Fernandes.
Lasa fomba hanaovana hetsi-panoherana  ny fanaovana ankivy ny fifidianana, na dia malalaka aza ny fifidianana any India. Ankoatra ny ao Goa, mampiasa io fomba io ihany koa ireo tanànakely ao afovoan'ny fanjakana Madhya Pradesh  , any amin'ny faritra andrefana ao Maharashtra , ary ny fanjakana atsinanana ao Odisha  mba hisian'ny famahana ny olana haingana avy amin'ny manampahefana tompon'andraikitra .Hatramin'izao, mbola tsy nsy tamin'ireo fanaovana ankivy ireo no nandraisan'ny governemanta fepetra. Nampiasa tetikady tahaka izany ireo mpifidy noho izany mba hanehoana ny fahadisoam-panantenana amin'ireo manampahefana sy ireo mpanao politika izay matetika tsy mifandray amin'ireo vondrom-piarahamonina atao tsirambina raha tsy mialoha ny fifidianana, amin'ny fiarovana ny vatom-pifidianana, saingy tsy mitana ny fampanantenany rehefa tapitra ny fifidianana.
Farany, inona no azon'ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina atao tsirambina atao ankoatra izany mba hisarihana ny sain'ireo izay lazaina fa mihaino azy ireo ka mandray fepetra mifandraika amin'izany raha tsy mitondra ho amin'ny fanovana eo amin'ny fiarahamonina ny fanaovana ankivy ny fifidianana?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/05/24/138688/
 nivoaka voalohany tao amin'ny Video Volunteers: https://www.videovolunteers.org/goa-boycott-lok-sabha-elections-says-only-promises-no-development/
 fifidianana ankapobeny: https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Indian_general_election
 Vakio bebe kokoa: Ny zavatra tsara ho fantatra momba ny fifidianana ankapobeny 2019 any India: https://globalvoices.org/2019/04/09/all-you-need-to-know-about-the-indian-general-elections-2019/
 foko tompotany ao Goa: https://en.wikipedia.org/wiki/Dhangar
 ny tatitra: https://timesofindia.indiatimes.com/city/goa/canacona-wards-stick-to-stand-boycott-polls-over-lack-of-road-poor-water-power-supply/articleshow/69016273.cms
 Departemantam-panjakana misahana ny ala: https://www.forest.goa.gov.in/
 Kongresy Nasionaly Indiana: https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_National_Congress
 fomba hanaovana hetsi-panoherana: https://www.indiatoday.in/elections/lok-sabha-2019/story/voters-boycott-polls-development-issues-1518972-2019-05-07